သူမပါဝငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးကို အားပေးဖို့ ပွောကွားလိုကျတဲ့ ပရိတျသတျအခဈြတျော နခွေညျဦး… – Cele Lover
သူမပါဝငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးကို အားပေးဖို့ ပွောကွားလိုကျတဲ့ ပရိတျသတျအခဈြတျော နခွေညျဦး…
ပွညျသူတှလေုပျတဲ့ SOCIAL PUNISHMENT ကို အမှုတောငျ မထားဘဲ TV မှာလာမယျ့ သူမပါဝငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးကို အားပေးဖို့ ပွောကွားလိုကျတဲ့ ပရိတျသတျအခဈြတျော နခွေညျဦး…
နခွေညျဦးက Beauty Blogger အဖွဈ လူမှုကှနျယ.ကျစာမကျြနှာထကျမှာ .အရငျဆုံးအောငျမွငျလာ.ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာ.တော့ နခွေညျဦးက ကွျောငွာ.လေးတှရေိုကျကူးရငျး သရုပျဆောငျအဖွဈ ရုပျရှငျဇာ.တျကားကွီးတှေ လကျခံရိုကျကူးလာခဲ့တာ ဖွဈပါ.တယျ။နခွေညျဦးရဲ့အဖဟော.တပျမတျောမှစဈမူထမျး.ဟောငျးတဈဦးဖွဈပါတယျ၊စိမျးလဲ့တငျအ.ပနျးပွလေုပျငနျး.လဲပိုငျရှငျလညျးဖွဈပါတယျ
သူမရဲပွလေုပျငနျးလဲပိုငျရှငျလ.ညျးဖွဈပါတယျသူမရဲ့ညီမလေးဟာ၁၀တနျးကိုမနှဈကကခြဲ့သူ.ဖွဈပါတယျ။သူမဟာBeautyBloggerက.နတေဈဆငျ့သူမအဖရေဲ့ခမျြးသာကွှယျဝမူတှကေို.အသုံးခပြီးမငျးသမီးဖွဈလာ.သူတဈဦးဖွဈပါတယျဒီကာလမှာ လူအမြားအပွား.သဆေုံးနခြေိနျမှာတောငျနခွေညျဦးတဈယောကျ speak out .လုံးဝမလုပျဘဲ ငွိမျးခမျြး.စှာ နထေိုငျနတောပါနျော။
ပြျောပှဲရှငျပှဲ.မြားတှငျ ပါဝငျဆငျနှဲ.နတောကိုလညျး ဆိုရှယျမီဒီယာမြားပျေါတှ.ငျမတငျပမေယျ့လ.ညျး ပရိသတျတှေ..က သူ့ရဲ့ အကငျြ့စရိုကျကို သိထားပွီးသားပါ..ပဲနျော။နခွေညျဦး ဟာ လကျရှိ ဖွဈပျေါနေ.တဲ့ မွနျမာ ပွညျသူ..တှေ ခံစားနရေတဲ့ မတရားမှုတှကေို .ဆနျ့ကငျြရေး.မှာ ပါဝငျ လှုပျရှားမှု မရှိသလို မိမိ…ရရှိထားတဲ့ အောငျမွငျမှု ကို အသုံးခခြွငျး… မပွုပဲစံပွပုဂ်ဂိုလျ.. အနနေဲ့မရှိနေ ခဲ့..တဲ့အတှကျကွောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ social punishment အပွငျးအထနျလုပျခံ..ရသူလဲဖွဈပါတယျNUG profile တှနေဲ့ တခြီခြီ လုပျနေ .ရငျတော့ social punishment လညျး ဘာမှ.အသုံးမဝငျဘူးနျော
သတိလေးလညျး ..ထားကွဦး ပရိသတျကွီး..ရေ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါ ကနေ အခြိနျအတျောကွာပြောကျနတေဲ့ နခွေညျဦး.တဈယောကျ ပွနျပျေါ. လာပါပွီနျော။ အရငျလို သူမရဲ့ လှုပျရှားမှု.တှတေဖွညျးဖွညျးခငျြးစီ ပွနျတငျလာ.တာကို ပရိသတျတှေ.သတိထားမိကွမယျ .ထငျပါတယျနျော။နခွေညျဦးရဲ့လုပျရကျတှေ.က အတျောလေး.ကို မကျြနှာ ပွောငျတိုကျလှနျးတာသိသာ.ပါတယျနျော။
အခုလဲ .သူမအကောငျ့မှာ “လပွေနေုလေး.တှေ သယျဆောငျလာပေးမယျနျေ့နလေ့ေး .ဖွဈပါစေ ✨🌶❤️” ဆိုပွီး ဓာတျပုံတှေ စတငျ လာပါပွီနျော။တငျထားတဲ့ ပုံအရတော့ .သူမ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျလမျးက ပုံမြားဖွဈပါတယျ comment တှငျလညျး tvမှာ ပွနျပွတော့မှာမို့ အားပေးဖို့ တိုကျတှနျးနပေါတယျလူတှကေ Social Punishmentလုပျကွဖို့ တဖှဖှ ပွောနကွေသူတှလေညျး အခုဆိုရငျ နခွေညျဦးရဲ့ ပရိသတျတှအေဖွဈပွနျပွီး မွငျတှနေ့ရေပါပွီနျော။
ပြည်သူတွေလုပ်တဲ့ SOCIAL PUNISHMENT ကို အမှုတောင် မထားဘဲ TV မှာလာမယ့် သူမပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို အားပေးဖို့ ပြောကြားလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် နေခြည်ဦး…
နေခြည်ဦးက Beauty Blogger အဖြစ် လူမှုကွန်ယ.က်စာမျက်နှာထက်မှာ .အရင်ဆုံးအောင်မြင်လာ.ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ.တော့ နေခြည်ဦးက ကြော်ငြာ.လေးတွေရိုက်ကူးရင်း သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာ.တ်ကားကြီးတွေ လက်ခံရိုက်ကူးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါ.တယ်။နေခြည်ဦးရဲ့အဖေဟာ.တပ်မတော်မှစစ်မူထမ်း.ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်၊စိမ်းလဲ့တင်အ.ပန်းပြေလုပ်ငန်း.လဲပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်
သူမရဲပြေလုပ်ငန်းလဲပိုင်ရှင်လ.ည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ညီမလေးဟာ၁၀တန်းကိုမနှစ်ကကျခဲ့သူ.ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာBeautyBloggerက.နေတစ်ဆင့်သူမအဖေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမူတွေကို.အသုံးချပီးမင်းသမီးဖြစ်လာ.သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာ လူအများအပြား.သေဆုံးနေချိန်မှာတောင်နေခြည်ဦးတစ်ယောက် speak out .လုံးဝမလုပ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်း.စွာ နေထိုင်နေတာပါနော်။
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ.များတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲ.နေတာကိုလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွ.င်မတင်ပေမယ့်လ.ည်း ပရိသတ်တွေ..က သူ့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို သိထားပြီးသားပါ..ပဲနော်။နေခြည်ဦး ဟာ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေ.တဲ့ မြန်မာ ပြည်သူ..တွေ ခံစားနေရတဲ့ မတရားမှုတွေကို .ဆန့်ကျင်ရေး.မှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားမှု မရှိသလို မိမိ…ရရှိထားတဲ့ အောင်မြင်မှု ကို အသုံးချခြင်း… မပြုပဲစံပြပုဂ္ဂိုလ်.. အနေနဲ့မရှိနေ ခဲ့..တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ social punishment အပြင်းအထန်လုပ်ခံ..ရသူလဲဖြစ်ပါတယ်NUG profile တွေနဲ့ တချီချီ လုပ်နေ .ရင်တော့ social punishment လည်း ဘာမှ.အသုံးမဝင်ဘူးနော်
သတိလေးလည်း ..ထားကြဦး ပရိသတ်ကြီး..ရေ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် ကနေ အချိန်အတော်ကြာပျောက်နေတဲ့ နေခြည်ဦး.တစ်ယောက် ပြန်ပေါ်. လာပါပြီနော်။ အရင်လို သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု.တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ပြန်တင်လာ.တာကို ပရိသတ်တွေ.သတိထားမိကြမယ် .ထင်ပါတယ်နော်။နေခြည်ဦးရဲ့လုပ်ရက်တွေ.က အတော်လေး.ကို မျက်နှာ ပြောင်တိုက်လွန်းတာသိသာ.ပါတယ်နော်။
အခုလဲ .သူမအကောင့်မှာ “လေပြေနုလေး.တွေ သယ်ဆောင်လာပေးမယ်နေ့်နေ့လေး .ဖြစ်ပါစေ ✨🌶❤️” ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံတွေ စတင် လာပါပြီနော်။တင်ထားတဲ့ ပုံအရတော့ .သူမ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းက ပုံများဖြစ်ပါတယ် comment တွင်လည်း tvမှာ ပြန်ပြတော့မှာမို့ အားပေးဖို့ တိုက်တွန်းနေပါတယ်လူတွေက Social Punishmentလုပ်ကြဖို့ တဖွဖွ ပြောနေကြသူတွေလည်း အခုဆိုရင် နေခြည်ဦးရဲ့ ပရိသတ်တွေအဖြစ်ပြန်ပြီး မြင်တွေ့နေရပါပြီနော်။
Previous Article ရှနေ့တေ့ဈယောကျဘဝမှ တျောလှနျရေးရဲဘျောဖွဈလာသူ လူငယျအမြိုးသမီး ( ရုပျသံ )
Next Article ဖမျးဆီးခံရပွီးနောကျ မိသားစုနဲ့လုံးဝ အဆကျအသှယျပွတျနပွေီဖွဈတဲ့ ခယျြရီထကျ